Home Wararka Waa sidee Caawa xaaladda Magaalada Muqdisho?
Waa sidee Caawa xaaladda Magaalada Muqdisho?
Muqdisho waxaa Maanta siweyn looga dareemay dhaq dhaqaaqgo Ciidan oo iska soo horjeeda, kaas oo salka ku haaya khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kadib markii la sheegay in Farmaajo uu Ciidan dul-dhigay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Baraha Koontorool ee laga soo galo Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa la dhigay Ciidamo farabadan oo waarkooe wata Gaadiidka Beebaha, kuwaas oo ka amar qaata Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo.
In kastoo xaaladda Magaalada Muqdisho ay tahay mid degan ayaa hadana waxaa meelaha qaar ee Magaalada Muqdisho laga dareemayaa dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo ay wadaan Ciidamo taabacsan Ra’iisul Wasaare Rooble.
Gaashaanle Geylac oo kamid ah Saraakiisha Ciidamada Badnaado Qaran ayaa shir jaraa’id uu ku qabtay agagaarka Isgoyska Sayidka wuxuu sheegay in ujeedkooda uu yahay sidii ay Farmaajo uga soo saaro lahaayeen Madaxtooyada.
Previous articleRW Rooble oo kala wareejiyey Taliska ciidamada Qalabka sida Farmajo.
Next article[Cabsi xooggan oo ka jirta Madaxtooyada] Ciidamada Badbaado Qaran oo qabsaday xaafado ku dhow Vill Somalia
Sargaal ka Tirsan dowlada oo lagu Dilay Af-gooye
Qatar oo 480 milyan oo doolar ugu deeqay Falastiin